တရုတ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် PP ယက်ထားသောအိတ်များဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပေါင်းစည်းထားသောစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ IFORCE
BOPP ပုံနှိပ်အိတ်များလိုင်း (က)
BOPP ပုံနှိပ်အိတ်များလိုင်း (ခ)
PP Raschel အိတ်များ
PP Block အောက်အဆို့ရှင်အိတ်များလိုင်း
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် PP ယက်ထားသောအိတ်များပေါင်းစပ်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် PP တန်ဖိုးအိတ် ...
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း Bobbin သန့်ရှင်းရေး ...
Gusseting စက်အလိုအလျောက် ...
အလိုအလျောက် Gusseting စက်
Gusseting စက် (စီးပွားရေး ...
နှစ်ခုထုတ်လွင့်နေသောတစ်ခုမှာ Die Lamin ...
NX စီးရီး 4-800 (Synchronou ...
ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှု6အရောင် BO ...
(ပုံမှန်) Leno & Mesh B (ပုံမှန်)
မြို့ပတ်မှင် (၆ လိုင်း)
မြို့ပတ်မှအလင်း (၄ လိုင်း)
PP ပြားချည်မျှင်ထုပ်ခြင်း (PP me ...
PP ပြားချည်မျှင်နှင့်ဆေးကြောစက် (စတ ...
PP ယက်ထားသောဘိလပ်မြေအိတ် ...
အလိုအလျောက်အပ်ချုပ် & Pri ...
အလိုအလျောက်အပ်ချုပ် & အပူ ...
PP ယက်အိတ် Ultrasonic Se ...
PP စုဆောင်းအိတ်များ Ma ...
Mac နှင့်ရှေ့နှင့်အနောက်ပုံနှိပ်ခြင်း ...
ပုံနှိပ်စက် (1-4) အရောင်များ
Mesh Bags ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
PP ၀ တ်စုံအိတ်များအေးစက်စက် ...
PP ၀ တ်စုံအိတ် Hot M ...
PP Block အောက်အဆို့ရှင်အိတ်များ ...
PP သည်အိတ်များစက်များ၊ စက်များဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့်စက်ပေါင်းစပ်စက်ဖြတ်စက်၊ အပ်ချုပ်စက်နှင့်ပုံနှိပ်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်အားကိုသက်သာစေသည်။
PP သည်အိတ်များစက်များ၊ စက်များဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသောစက်ပေါင်းစပ်ထားသောဖြတ်စက်၊ အပ်ချုပ်စက်နှင့်ပုံနှိပ်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်အားကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည် PP ယွန်းအိတ်အမျိုးမျိုး၊ ဓာတုအိတ်များ၊ ဂျုံမှုန့်အိတ်များ၊ ဆန်အိတ်များ၊ အိတ်အိတ်များ၊
1.Auto pneumatic လိပ်တင်
2. ကောင်တာ prefabricated နိုင်ပါသည်
၃။ ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ခါးပတ်အိတ်များထွက်လာသည့်အခါချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်ပါးလွှာသောအိတ်များ၊ အိတ်များနှင့်အိတ်ရှည်များ၊ အလွန်အရေးကြီးသည်။
5.It သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအိတ်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအကျိုးရှိစွာဖြစ်ကြသည်
7.Position controller နှင့်အရောင်ရှာဖွေစက်သည်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေသည်။
၉။ Newlong အပ်ချုပ်စက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအထူးမှိုမှိုများ။ တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆခေါက်အစွန်း, ယူနီဖောင်း edgefold, ချည်ကြီးစွန်း၏အရှည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
၁၂။ အနားအကျယ်ကိုအလွယ်တကူညှိရန်လွယ်ကူသည်၊ အကျယ် - ၁.၅ စင်တီမီတာမှ ၂ စင်တီမီတာ (သို့) ၁.၇ စင်တီမီတာ - ၃ စင်တီမီတာ (အခြေခံ GSM)
13. အစိုင်အခဲ roller (berings) များသည်အိတ်များကိုနောက်လုပ်ငန်းစဉ်သို့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေနိုင်သည်။
14.Photoelectric switch ကို, C1 ကို C2
၁၅။ ဤစက်တွင်မတူညီသောပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်း၊ အပြတ်အသတ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောသံလိုက်မော်တာများတပ်ဆင်ထားသည်
16. NBR မှင်ကြိတ်စက်သည် ၁၀ မီလီမီတာရှိသောသတ္တု anilox roller ကွက်နံပါတ် ၂၀၀ နှင့်အတူ
17. ရော်ဘာမှင်ကြိတ်စက်သည် NBR ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၁၈။ မင်ကြိတ်စက်နှင့် anilox roller နှင့် anilox roller နှင့်ပုံနှိပ်စက်များသည်ပိတ်ထားနိုင်သည်
၁၉။ ပုံနှိပ်စက်သည်အလိုအလျောက်ခြေရာခံ။ ခွဲထုတ်ပေးသည်
၂၀။ Anilox roller သည်မှင်များကိုကောင်းမွန်စွာဖြန့်ဝေပြီးမှင် ၃၅% ကိုချွေတာသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းအဆင့်ကိုတိုးစေသည်
21. မှင်သည့်အရာတစ်ခုကိုဖြုတ်တပ်။ သန့်ရှင်းရေးအဆင်ပြေသည်
၂၂ ။ စက်ကို PLC ကွန်ပျူတာဘုတ်မှထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ PLC မော်နီတာမှတစ်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြသခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလူတစ် ဦး မှလည်ပတ်စေပြီးလုပ်အားကိုသက်သာစေသည်။
၂၃။ စုဆောင်းသောအစိတ်အပိုင်းသည်အိတ်များကိုရေတွက်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ခေါက်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်း & အပ်ချုပ် & ပုံနှိပ်ခြင်း
ဖြတ်တောက်ခြင်း & အပ်ချုပ်
25-50 PCs / min
အထည် roller ၏ Max.size
အကျယ် 800mm, အချင်း 1200mm, 700kg
လူပျို / နှစ်ဆ
ခုခံဝါယာကြိုး, ချည်,offset ပန်းကန်, မင်
380V 3- အဆင့်
PLC, လူ့ - ကွန်ပျူတာ interface ကို
ယေဘုယျရှုထောင့် (L * W * H)
10500 * 6000 * 1400 မီလီမီတာ
အလိုအလျောက် windlass unwinding
ကန ဦး ခါးပတ်စနစ်
Thread အချက်ပြစက်ကို Thread
အီလက်ထရောနစ် Photocell မျက်လုံး
(ZX7-250S, AC 120V-560V)
(4M³, 0.8Mpa, optional)
ရှေ့သို့ အပြည့်အဝအလိုအလျောက် PP ယက်ထားသောအိတ်များဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အပ်ချုပ်စက်
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထည့်ခြင်း & အပ်ချုပ်
PP Jumbo Bag ပြုလုပ်ခြင်းစက်
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်သောစက်များပြုလုပ်သည့် PP ယုန်အိတ်များကိုအာရုံစိုက်ပါ။
အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း ...
Computer Control6အရောင် BOPP ပုံနှိပ်စက်
Iforce Intelligent Equipment Co. , Ltd ။
NO.5 Jibei စက်မှုဥယျာဉ်၊ Jiyang ကောင်တီ၊ Jinan, Shandong, China